ခင်ပွန်းသည်အပေါ်ထားရှိအပ်သည့် သဘောထား ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 10:25 PM | No မှတ်ချက် | Lwin Pyin
အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေရော အိမ်ထောင်ရှင်မလောင်းတွေရော ဖတ်ရအောင်လို့ ဖတ်မိတဲ့စာလေး ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ -------
တစ်နေ့ကိုယ့်ဆီပြန်လာပါလိမ့်မယ် လင်မယားဆိုတာတစ်ဦးအကြောင်းတစ်ဦးထိန်းသိမ်းဖို့ပါ (ဧဖက် ၅:၁၂)
၃-အမူအရာအစောင်းအမြောင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုမဆက်ဆံပါနဲ့ သူဘယ်လိုအထာကောက်သွားမလဲဆိုတာမသိနိင်ဘူး အမြဲတမ်းပြန်ခံပြောတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ကိုမပိုင်ဆိုင်ကြဘူး
(သုတ္တံ ၁၅:၁၃) ၄-ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုတခြားယောက်ကျားတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေအားလုံးကိုကိုယ်မသိနိုင်ပါဘူး ခင်ပွန်းသည်ရဲ့မာန သိက္ခာကိုစော်ကားမိရင် ကိုယ့်အပေါ်သူထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းလျေ့ာနည်းသွားပါလိမ့်မယ် ၅- ခင်ပွန်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို မကြိုက်လို့ဆိုတိုင်းမလေးမစားမဆက်ဆံပါနဲ့ သူတို့တွေကိုရှောင်ဖယ်အောင်သင့်ခင်ပွန်းပဲလုပ်သင့်ပါတယ် (သုတ္တံ ၁၁:၂၂) ၆- ခင်ပွန်းသည်လက်ထပ်ထားတာဟာသင့်ကိုပါ အိမ်အကူကိုမဟုတ်ဘူးတခြားသူကိုမဟုတ်ဘူး အိမ်ရှင်မတာဝန်ကိုယ်ဆောင်ရွက်ပါ(ကမ္ဘာဦး ၂:၂၄) ၇-သင့်ခင်ပွန်းကိုဂရုစိုက်ရမဲ့တာဝန်ကိုတခြားသူကိုမပေးပါနဲ့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းဟာ ဇနီးသည်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်(ဧဖက်၅:၃၃) ၈-ခင်ပွန်းသည်အိမ်ကိုလက်ချည်းသက်သက်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရင်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ အားပေးပါ (တရားဟော၃:၂၈) ၉-အဖြုန်းကြီးတဲ့ဇနီးမဖြစ်ပါစေနဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ချွှေးဟာအဖိုးတန်ပါတယ်
သူ့အလိုလိုက်လျောပါ တခြားတစ်ယောက်သင့်နေရာမယူပါစေနဲ့ ယောက်ကျားတိုင်း(ရွေးကောက်ခံလူအပါအဝင်)သွေးသားဆာလောင်မှုကိုကြာကြာမခံစားနိင်ကြပါဘူး
သင့်ရဲ့အိမ်အဖက်ဆည်မရဖြစ်သွားပါလိမ်မယ်(ရှောလမုန် ၅:၉) ၁၂-အများရှေ့မှာခင်ပွန်းကိုယ်စားဖြေကြားခြင်းမပြုပါနဲ့ သူ့ဟာသူကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းပါစေ သင့်ကိုယ်စားတော့သူဖြေပေးနိင်ပါတယ် (သုတ္တံ၃၁:၂၃) ၁၃-ကလေးတွေရှ့မှာခင်ပွန်းကိုအော်ဟစ်ခြင်းစိန်ခေါ်ခြင်းမပြုပါနဲ့ ပညာရှိအမျိုးသမီးတွေအဲဒီလိုမလုပ်ကြပါဘူး(ဧဖက်၎:၃၁) ၁၄-ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ထက်မြက်မှုကိုသူကိုယ်တိုင်မသိခင်သိပါစေ(သုတ္တံ၁၂:၄) ၁၅-ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုမိမိခင်ပွန်းနဲ့အနီးကပ်မလွန်ပါစေနဲ့
၁၆-ရေချိုးခန်းနဲ့မှန်တင်ခုံရှေ့မှာမလောပါနဲ့ (အချိန်ယူသင့်သလာက်ယူပြီးပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေပါ) အပြင်မှာ လှလှပပဖြစ်ဖို့အချိန်ပေးထားသူတွေသင့်ခင်ပွန်းဘေးမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတက်လို့ပါ(၁ဓမ္မရာဇဝင်၂၅:၃)
အချိန်ကုန်ခံမေးမနေပါနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြတ်သား ဆုံးဖြတ်ပါ (လု၂၁:၁၆) ၁၈-ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငွေကြးပ်ါအခြေမခံပါနဲ့ မဟုတ်ရင်သူ့ထက်ငွေပိုရှာနိင်တဲ့တနေ့သူ့ကိုအရင်လိုနာခံပါ့ဦးမလား?
အဓိကကျပါတယ်(ဂလာတိ၆:၉) ၂၀-ကိုယ့်အကြံအစည်ကသူ့ထက်ပိုကောင်းခဲ့ရင်တောင်မှသူနဲ့မယှဉ်ပါနဲ့ သူနဲ့ကိုယ်တဖွဲ့ထဲပဲလေ(ဂလာတိ၆:၁၀) ၂၁-သူ့အပေါ်အပြစ်တင်မစောပါနဲ့ တပြစ်တောက်တောက်လုပ်နေတဲ့အိမ်ရှင်မကိုဘယ်သူမှမလိုချင်ကြပါဘူး(ဧဖက်၎:၂၉) ၂၂-ပျင်းရိတဲ့ဇနီးဟာဂရုမစိုက်တဲ့ဇနီးပါပဲ ကိုယ်ရေချိုးဖို့တောင်မေ့နေတက်သူမျိုးပေါ(သုတ္တံ၂၄:၂၇/ ၂၀:၁၃) ၂၃-မယ်မယ်ရရချက်ကျွှေးပါ အစားအသောက်ကိုပေါ့ပျက်ပျက်သဘောထားတဲ့ယောက်ကျားမရှိပါဘူး(သုတ္တံ ၃၁:၁၄) ၂၄-ပြင်းထန်စွာတောင်းဆိုမှုမပြုပဲ အချိန်တိုင်းကိုပျော်မွေ့ပါ(လုကာ၁၁:၃) ၂၅- ခင်ပွန်းသည်အပါအဝင်အိမ်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းကိုရေပူရေအေးကမ်းပြီးကြိုဆိုပါ ချိုသာတဲ့စရိုက်ဟာစစ်မှန်တဲ့အလှတစ်ပါးပါ(သုတ္တံ၃၁:၁၁) ၂၆-အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးမြင်ဝါဒရှိသူတွေနဲ့မပေါင်းဖက်ပါနဲ့(သုတ္တံ၂၂:၁၄) ၂၇-အိမ်ထောင်ဆိုတာကိုယ်တန်ဖိုးထားရင်ထားသလောက်အဖိုးတန်တဲ့အရာပါ ပေါ့ပျက်ပျက်မထားသင့်ပါဘူး
(ဟေဗြဲ၁၃:၄) ၂၈-ရင်သွေးတွေဟာဘုရားဆီကလာတဲ့ကောင်းချီးတွေဖြစ်တယ် ချစ်ခင်ပါကောင်းမွန်စွာသင်ပြပေးပါ (သုတ္တံ၂၂:၆)
ဘယ်အသက်အရွယ်ရောက်ရောက်ဂရုစိုက်လွှမ်းမိုးနိင်ပါတယ်(သုတ္တံ၃၁:၂၈) ၃၀-ဆုတောင်းခြင်းအားကြီးတဲ့ဇနီးဟာသာလွန်ပြင်ဆင်တဲ့ဇနီးဖြစ်တယ် အဲဒါကြောင့်ခင်ပွန်းအတွက်အိမ်ထောင်အတွက်အမြဲဆုတောင်းပါ (၁သက်၅:၁၇)
စာကြွင်း ဟုတ်ကဲ့ အိမ်ထောင်သာယာခိုင်မြဲဖို့ရာ ၂ဖက်လုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ် ဒီပိုစ်မှာတော့ မိန်းမဘက်ကလုပ်ပေးနိင်တဲ့အရာတွေကိုစုစည်းထားပါတယ်
ဒီအရည်အသွေးတွေကမရှိမဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး (တစ်ချို့အချက်အလက်တွေဆိုရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေပါ)ဒီလိုလေးတွေကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်အိမ်ထောင်ကို
အမျိုးသားဘက်က လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ စုစည်းပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်
(Sai Sai Koh)